Google weputara YouTube na otutu mgbanwe di egwu | Gam akporosis
YouTube ngwa na-aga n'ihu ịnata mmelite que ha na-agbanwe usoro nke nku anya ha iji gbalịa imeziwanye ahụmịhe onye ọrụ nke onye ọrụ na-enweta kwa ụbọchị mgbe ọ banyere n'ime ya na-egwu vidiyo kachasị mma nke oge a. Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ Google anaghị akwụsị imetụ aka dịka a ga - asị na ọ naghị adaba na ya na ndị ọzọ, ọ bụrụ na ọ maara na ọ bụ otu n'ime ngwaahịa ya kachasị mma. Nke a dị otu a, maka na YouTube bụrụ otu n’ime ndị ‘’ maapụ ’’ tontanetị ịmata ya dịka ọ dị taa.
Taa ngwa ahụ enwetawo mgbanwe ole na ole na-atọ ụtọ nke Google chere na nweta ahụmịhe onye ọrụ ka mma na nloghachi; nke n'ikpeazu bu ihe obu. Ọ bụ na ihuenyo ụlọ ebe ndị si Mountain View metụrụ aka na ebe ahụ, mana ihe kachasị pụta ìhè na ndụmọdụ ahụ sitere n'akụkụ sava ahụ, ndị a ga-enyere anyị aka ịnwe vidiyo ka mma dabere na mmasị onwe onye. Ndị a ka YouTube mụtara ka anyị na-ele vidio ndị ọzọ, yabụ ọ ga-abụ ụbọchị ole na ole tupu anyị ahụ mmetụta Google chọrọ ịme.
Emebela ihuenyo nke ụlọ na YouTube n'ụzọ ọ ga-esi dokwuo anya na ihe oyiyi ndị ahụ na-egosi vidiyo ndị anyị nwere ike mụta nwa, buru ibu ka ha wee nwee ọrụ dị ukwuu. Ihu ọma ị ga - ahụ ha buru ibu karịa etu ha dị.
Mana olee ebe chicha nke mmelite a bu ọhụrụ video nkwanye usoro dabere na teknụzụ ntanetị "neural" nke pụtara na ọ nwere ike ịchọta usoro na akpaghị aka ma gaa n'ihu na-amụta n'aka ha iji melite ha. Usoro a ga-elezi anya na-atụ aro vidiyo ndị na-adịbeghị anya na ndị sitere n'aka ndị okike ị na-eso. Dị ka Google n'onwe ya si kwuo, usoro ahụ na-edozi ọnọdụ iji melite ọdịnaya nke a na-emegharị site na ndenye aha.
Ọhụrụ mbipute anaghị achọ mmelite ngwa, ọ ga-abịa site n'akụkụ ihe nkesa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa YouTube na-emezigharị ụlọ ma melite vidiyo ndị a tụrụ aro
Instagram na-anwale mgbanwe na nhazi nke ngwa ya